သက်ဝေ: နားအလှူ နှင့် မျက်စေ့အလှူ
tg.nwai July 1, 2009 at 6:53 PM
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာ သက်ဝေရယ်..နားအလှူအကြောင်း အခုမှပဲ ကြားဖူးတော့တယ်.. ဟုတ်တယ်နော်..အဲဒီလို စိတ်လေးနဲ့ လုပ်နေရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိတာပေါ့်နော်..ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ..။
တချို့ဘလော့ဂ်တွေက သူများတွေရဲ့ မျက်စေ့ကို အလှူခံရင်း အလင်းရောင်တွေ ပိုဖွင့်ပေးသလိုပါပဲ။ အခု သက်ဝေလိုပေါ့.. ဒါလေး ဖတ်လိုက်ရပြီး ကြည်နူးရတယ်..ဝေမျှရတာလေး တဆင့် ပြန်အသုံးချဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်များ အကျိူးများလိုက်မလဲလေ..။
Kay July 1, 2009 at 7:03 PM
မျက်စိ အလှူ လာလုပ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်လည်း ရ..၀မ်းလဲ ၀သွားပါတယ်။း)
Good listerner ဖြစ်ဖို့..သိပ်ခက် ဆိုပဲ။
မျက်စိလာလှူရင်း ဗဟုသုတတွေ၊ စိတ်ကြည်နူးမှု၊ သီချင်းတွေ၊ အမြဲ ပြန်ပြန်ယူသွားတယ်လေ...။
ခင်မင်းဇော် July 1, 2009 at 7:21 PM
ဟယ် မျက်စိတော့ လာလှုလိုက်ပြီ။ နားလဲ လာလှုချင်သေးတယ် သက်ဝေကို ...
နားလှုဖို့လိုတာ တော့ ကိုယ်တွေ့နဲ့ ရင်းပြီးကို သိတယ်။
တချို့တွေ သူများပြောစကား နားမထောင်ပဲ သူချည်းစွတ်ပြောနေတာ နားထောင်ပေးရတိုင်း အော် စိတ်မ၀င်စားပဲ နားထောင်ပေးနေရတာ သူမသိရှာဖူး ၊ သူမသိရှာလေဘူး ဆိုပြီး ခဏခဏ ကြုံဖူးလို့ ဟိ။
အဲဒါသက်တူရွယ်တူတွေကို ပြောတာနော် ။
ပေါက်ကရတွေကို လာဖတ်ပေးရင်း မျက်စေ့အလှူပေးတဲ့အတွက်..ကျေးဇူးပဲ။
အောင်သာငယ် July 1, 2009 at 8:32 PM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပဲ ညီမလေးရေ့...
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ July 2, 2009 at 12:03 AM
ကျနော်လည်းလှူပါမယ်ဆိုတာကို လက်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မရှိ...:P
အလုပ်တွေပိလျက်က ဒီလိုစာကောင်းလေးတွေ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
P.Ti July 2, 2009 at 12:07 AM
အဲလို မတွေးမိဘူး... စာဖတ်တဲ့လူတွေက မျက်စိအလှူပေးသလို အမကလည်း အတွေးလှလှလေးတွေ အလှူလုပ်နေတာပဲလေ။
Moe Cho Thinn July 2, 2009 at 12:58 AM
သိပ် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲမမ။
မမ ရဲ့ အမေရိကားက အန်ကယ်ကြီးဆိုတာကို လေးစားခင်မင်မိပါတယ်။
ချိုသင်းလဲ ဖုန်းကို ကိုယ်က စပြီး အလာပ္ပ သလာပ္ပ မဆက်တတ်တာ ခက်တယ်။ ချိုသင်းရဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။ ကိစ္စရှိမှပဲ ဆက်ဖြစ်တာ။ လူကြီးတွေကိုတော့ အကြောင်းမရှိလဲ ဖုန်းလေး ဆက်ပြီး အခုလို နားအလှူလေး ပေးဖို့ သတိချပ်သွားမိတယ်။
မမ ကို မျက်စိအလှူလာလုပ်ရတာ မမ ပေးတဲ့ ကုသိုလ် ကို သာဓုခေါ်ပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ တကယ်လုပ်မှာပါ။
khin oo may July 2, 2009 at 1:23 AM
တို့အမျိူးသားက တို့နဲ့ရတာ သူကံကောင်းတယ်တဲ့ နားအေးလို့တဲ့ ။ တို့ကစကားလည်းမပြောဘူး သိတ်လဲတောင်းဆိုခြင်းမရှိ.အေးချမ်းတယ်။
khin oo may July 2, 2009 at 1:24 AM
zizawa July 2, 2009 at 1:38 AM
မျက်စိလှူချင်ရင်တောင် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်က ရှိအုံးမှ။ post ကောင်းကောင်းလဲ ရှိအုံးမှ။ ကျေးဇူးပါအမ။ အလှူအထမြောက်သွားတဲ့အတွက် :o)
နေဒေးသစ် July 2, 2009 at 3:02 AM
မျက်စိလှူရတာ သိပ်တော့ ပြဿနာ မရှိပါ ...
နားအလှူကတော့ တော်တော် စိတ်ရှည်မှ ရလောက်မည် ထင်သည် ...
မီယာ July 2, 2009 at 5:34 AM
မသက်ဝေ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာ။ နားအလှူတော့ မကြာခဏပေးရတတ်တယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အိုးကြီးလို့ သတ်မှတ်ထားသလားထင်ရအောင် အချိန်မရှိ အခါမရှိ ပြောချင်တာပြောသမျှ နားထောင်ပေးတယ်။ သူတို့ထက်မကတဲ့ အပူတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း သူတို့ကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်လိုလူတွေ အများကြီးပဲလို့ တွေးပြီး ခွန်အားယူပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အမသက်ဝေရေးတဲ့ ပို့စ်တွေဆို မျှော်မျှော်နေတာ
နားအလှူအကြောင်းဖတ်သွားမှ ဒီမှာလဲ တခါတလေ အဖွားကြီးတွေကို ကိုယ်က သွားမေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေ လာလာပြောရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်တော်နဲ့စကားဖြတ်မရဘူး။ ကိုယ်လည်း အလိုက်အထိုက်ပြောပီး နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စကားပြောချင်တာ... အဖော်လိုနေရှာတာကိုး..။
ဒီပို့စ်လေးက ပီတိဖြစ်စရာပါ....ဒါပေမယ့် တကယ်လိုက်လုပ်ဖို့တော့ နည်းနည်း ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်...ဦးလေးကြီးကိုတော့ လေးစားပါတယ်....
PAUK July 2, 2009 at 9:14 AM
စိမ်းနေရင် ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်တာပဲ)
ပန်းခရမ်းပြာ July 2, 2009 at 9:21 AM
မျက်စေ့ လာလှုပါတယ် မသက်ဝေ။
Thant July 2, 2009 at 9:59 AM
နားလှူတာ တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ရှည်မူမျိုးနဲ့မရဘူးနော် ။ အန်ကယ်ကြီးနဲ့ အစ်မကို လေးစားပါတယ် ။ သန့်လဲ နားလှူနိုင်အောင် ကြိုးစားဦးမယ် ။ အစ်မတော့ ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားပြီ ။
Hmoo July 2, 2009 at 10:39 AM
I need liver Donor...
Because..I already drunk mys
ur writing style is nice...I notic u r more patient and edit..thx :)
sonata-cantata July 2, 2009 at 10:58 AM
ပို့စ်ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းထဲမှာ အလှူခံလာတတ်တဲ့ မျက်မမြင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးလည်း မရှိရှာလို့ ဒရွတ်တိုက်သွားရတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ အော်သံလေး သတိရသွားလို့...
သူအော်သလိုလေး အော်လာတာ...ဟော..ဟော..သက်ဝေက ဉာဏ်အလင်းတွေ တထောကြီး လှူလိုက်တယ်...
ရွက်လွင့်ခြင်း July 2, 2009 at 11:44 AM
rose of sharon July 2, 2009 at 1:33 PM
မေဇင် July 2, 2009 at 3:46 PM
မှန်တယ် မမရယ်...နားအလှုတော့ နောင့်က သိပ်မလှုဖူးဘူး...မျက်စိအလှုကတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့...မျက်စိထွက်ကျမတတ်ကို လှုတာ မမရဲ့..။း)
Thandar July 2, 2009 at 8:59 PM
ma ma thet wai,
thanksalotama.
now i ok.after read ur posts, my heart peaceful.
when i reading the mm blogs, my hb's ear also peaceful :)P
Thandar July 2, 2009 at 9:07 PM
by the way ma ma khin oo may,
always advertise ur hubby.
very love to him?
ပုံရိပ် / Pon Yate July 3, 2009 at 9:14 AM
မသက်ဝေရေ အပြန်အလှန်ပေါ့။ ဖတ်တဲ့ လူတွေက မျက်စိအလှူပေး သလို၊ ရေးတဲ့သူကလည်း အသိအလှူ၊ သတိ အလှူ၊ ဗဟုသုတွေ အလှူ ပေးတာပေါ့။
သီဟသစ် July 5, 2009 at 4:14 PM
မျက်စိအလှူတွေ လာပေးပြီး ဥာဏ်အလင်းတွေကို အလှူလာခံသွားပါတယ် ခင်ဗျာ
အန်ကယ်ကြီးကိုရော၊ အလင်းတန်းလေးတွေ ပြန်မျှဝေပေးတဲ့ မမသက်ဝေကိုရော လေးစားပါ၏